Ka e were ya na otu nwa okorobịa mara mma nke bịara ọhụrụ na klas unu na-echu gị ụra. Gị ana-eche, sị: ‘Ebe ọ bụ na ọ naghị atụpụrụ m ọnụ, ọ̀ dị njọ ma m na-eche banyere ya?’ Ọzọkwa, ọ bụghị naanị gị ka ọ na-echu ụra. Ụmụ agbọghọ niile na-anwụrụ ya. Otú i si mara bụ na ị na-anụ ka ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-ekwu banyere ya mgbe niile.
Na mberede, ya elee gị anya. Ya eju gị anya na ọ mụmụrụ ọnụ ọchị. Gị amụmụọkwa ọnụ ọchị. Ya abịakwute gị.
Ya ejiri ihere jụọ gị, sị, “Nne, ndaa?”
Gị asị ya, “Ọ dị mma.”
Ya asị gị, “Aha m bụ Emeka.”
Gị asị ya, “Ọ dị ka ị̀ bịara ọhụrụ.”
Ya asị gị, “Anyị kwabatara ebe a ọhụrụ n’izu ole na ole gara aga.”
Ma ọ ka dị gị ka ọ̀ bụ ná nrọ ka gị na Emeka na-ekwu okwu!
Emeka ekwuzie, sị: “Ehee, a gbasaa taa, m ga-eme oriri n’ụlọ anyị. Ị̀ ga-abịakwa?”
Ya abịarukwuo gị nso, takwunyere gị, sị,
“Ka m gwakwa gị, papa m na mama m anọghị ya, mmanya ga-abụkwa atụrụ tawa. Ọ̀ kwa ị ga-abịa?”
Emeka ana-eche ka ị zaa ajụjụ ahụ. Ụmụ agbọghọ ndị ọzọ nọ n’ụlọ akwụkwọ unu ga-ekwe ozugbo!
Olee ihe ị ga-ekwu?
Ka e were ya na ụmụ okorobịa abụọ nọ n’ụlọ akwụkwọ unu na-abịakwute gị. Obi awụba gị n’afọ n’ihi na n’izu a, ha agbalịala ugboro abụọ ime ka ị ṅụọ sịga. Nke a ga-abụ nke ugboro atọ.
Onye nke mbụ asị gị: “Ị̀ nọrọkwala naanị gị? O nwere ihe m chọrọ inye gị.” Ya elee gị anya, manye aka n’akpa wepụta ihe, matịa aka ka o nye gị ya.
Gị ahụ ihe yiri sịga n’aka ya. Ị makwanụ ihe ọ bụ, obi awụbakwuo gị n’afọ.
Gị asị ya, “Ewela iwe. Ọ̀ kwa m gwala gị na anaghị m aṅụ . . . ”
Onye nke abụọ anara gị okwu n’ọnụ, sị: “Ọ̀ kwa n’ihi chọọchị unu ahụ? Ọ naghị ekwe gị kporie ndụ!”
Onye nke mbụ ahụ ajụọ gị, sị: “Ị̀ bụ onye ime ọhịa?”
Gị ejisie ike sị ya, “Mba, abụghị m onye ime ọhịa.”
Onye nke abụọ ekonye gị aka n’olu. Ya ejiri nwayọọ sị gị, “Ṅụtụnụ.”
Onye nke mbụ achọọ itinye gị sịga ahụ n’ọnụ ma wetuo olu sị gị, “Anyị agaghị agwa onye ọ bụla. O nweghị onye ga-ama.”
Olee ihe ị ga-eme?
IHE dị otú ahụ na-eme kwa ụbọchị n’ụwa niile. Ma n’eziokwu, ụfọdụ ndị na-eto eto dị njikere imeri ụdị nsogbu ahụ karịa ibe ha. Ọ bụrụ na e nyewe nwa okorobịa nsogbu ka ọ ṅụọ sịga, o nwere ike iche, sị: ‘Achọghị m ịṅụ sịga, ma nsogbu a akarịala. Gịnị mere m gaghị egosi ụmụ akwụkwọ ibe m na abụghị m onye ime ọhịa?’ Ma ọ bụkwanụ, nwa agbọghọ nke otu nwa okorobịa gwara ka ha kpapụ nwere ike ịgwa onwe ya, sị: ‘Ọ mara mma nwoke. Gịnị mere m gaghị eso ya kpapụ naanị otu ugboro a?’
N’aka nke ọzọ, a kụzierela ọtụtụ ndị na-eto eto iji obi ike nọgide n’ihe ha kweere. N’ihi ya, n’agbanyeghị na o yiri ihe ijuanya, a naghị enyecha ha nsogbu. Ị̀ chọrọ ịdị ka ụdị ndị na-eto eto ahụ? Ọ bụ ihe obi ụtọ na i nwere ike ịdị ka ha! Olee otú ị ga-esi adị ka ha?
Baịbụl ga-enyere gị aka iji obi ike merie nsogbu ndị na-eto eto na-enwe. Ndụmọdụ dị n’ime ya bụ ndụmọdụ kacha mma n’ihi na ọ bụ Okwu Chineke si n’ike mmụọ nsọ. (2 Timoti 3:16, 17) Olee ụdị nsogbu Baịbụl nwere ike inyere gị aka imeri? Lee isiokwu ndị e depụtara n’ebe a, kanye ✔ ná ndị ọ bụla kacha amasị gị.
□ Okwu nwoke na nwaanyị
□ Ịghọta mgbanwe m na-enwe n’ahụ́ m
□ Imeta ndị enyi
□ Imeri nsogbu ụlọ akwụkwọ
□ Iji ego m eme ihe bara uru
□ Mmekọrịta mụ na papa m na mama m
□ Ijide onwe m
□ Ịhọrọ ntụrụndụ
□ Ime ka mmekọrịta mụ na Chineke ka mma
Dị ka ị ga-ahụ na peeji nke 4 na nke 5, isiokwu ndị a e depụtara ebe a na ndị ahụ e dere ná nkebi itoolu ndị dị n’akwụkwọ a bụ otu. Olee ndị ị kanyere akara na ha? Ọ ga-adị mma ma i buru ụzọ gụọ nkebi ndị ahụ. Ụkpụrụ Baịbụl ga-enyere gị aka n’ihe ndị ahụ. Akwụkwọ a ị na-agụ ugbu a ga-egosi gị otú ụkpụrụ Baịbụl ga-esi nyere gị aka. *
Akwụkwọ a ga-enye gị ohere ikwu ihe i chere. Dị ka ihe atụ, ná ngwụcha isiokwu ọ bụla, ị ga-ahụ igbe bụ́ “Ihe M Ga-eme!” N’ebe ahụ, a ga-agwa gị ka i dee otú i chere ị ga-esi eme ihe ị gụrụ eme. Ebe Ị Ga-ede Ihe—dị ka “Ihe M Ga-eme ma Ndị Ọgbọ M Nyewe M Nsogbu,” nke dị na peeji nke 132 na nke 133—ga-enyere gị aka iche echiche banyere nsogbu ndị ị na-enwe ma cheta ihe ị ga-eme iji merie ha. Ọzọkwa, ná ngwụcha nkebi ọ bụla n’akwụkwọ a, e nwere peeji e dere “Ebe M Ga-ede Ihe,” nke ga-eme ka i dee otú ihe ahụ ị gụrụ si metụta ndụ gị. N’ebe ụfọdụ n’akwụkwọ a, ị ga-ahụkwa peeji ebe e dere “Onye M Ga-eṅomi.” Ha niile dị itoolu. Na peeji ndị ahụ, e depụtara ụfọdụ ndị a kpọrọ aha na Baịbụl i kwesịrị iṅomi.
Baịbụl gbara gị ume, sị: “Nweta amamihe, nweta nghọta.” (Ilu 4:5) Okwu bụ́ “amamihe” na “nghọta” apụtaghị naanị ịmara ihe dị iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ. I kwesịrị ịghọta ihe niile a na-ekwu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị mata ihe na-esi n’àgwà ọjọọ apụta nakwa ihe na-esi n’ime ihe ọma apụta, ọ ga-enyere gị aka iji obi ike merie nsogbu ndị ọgbọ gị na-enye gị.
Ka obi sie gị ike na n’agbanyeghị otú nsogbu gị si yie ihe siri ezigbo ike, ọ bụghị naanị gị na-enwe ya. Ndị ọzọ enweela ụdị nsogbu ahụ ma merie ya. I nwekwara ike imeri ya! Na-agụ akwụkwọ a bụ́ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 2. Ọ ga-eme ka o doo gị anya na ndụmọdụ dị na Baịbụl bụ ndụmọdụ kacha mma!
^ par. 40 Ọtụtụ n’ime ihe e dere n’akwụkwọ a si n’isiokwu bụ́ “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị,” nke na-adịkarị na Teta! nke Ndịàmà Jehova na-ebipụta.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ebe M Ga-esi Enweta Ndụmọdụ Kacha Mma?